Hogaamiyaha Catalonia oo jawab adag laga sugayo - BBC News Somali
Hogaamiyaha Catalonia oo jawab adag laga sugayo
Hogaamiyaha gobolka Catalonia, Carles Puigdemont waxaa soo foodsaaray wakhtigii kama dambaysta ahaa ee loo qabtay si uu uga laabto dalabka madaxbannaanida, iyadoo Spain ay ku goodiyay in ay meesha ka saari doonto ismaamulka gobolka haddii aysan ka laabanin rabitaankooda inta ka horraysa 10:00 wakhtiga Spain oo u dhiganta (08:00 GMT).
Bishii Oktoobar 1 ayuu sixiixay aftidii madaxbannaanida balse wuu laalay isaga oo wadahadal dalbaday.
Wararka qaar waxay sheegayaan in uu sii wadi doono madaxbannaanida haddii xukuumadda dhexe ee Spain ay si toos ah ula wareegtp maamulka.
Waxaa jira cabsi laga qabo in ay arrintaasi Catalonia ka abuurto degenaansho la'aan shacab.
Gudoomiyaha Guddiga Yurub oo ka soo horjeedsaday madaxbannaanida Catalonia
Qodobka 155 ee dastuurka Spain ee la qoray 1978, kaasoo dalka ka hirgeliyay dimuqraadiyad ka dib markii uu saddex sano ka hor geeriyooday kaligii taliyihii Janaraal Franco, ayaa u ogolaanaya xukuumadda Madrid inay si toos ah ula wareegto maamulka Catalonia marka ay xiisad taagan tahay, inkastoo taasi aanay weligeed dhicin.
Iyadoo ay soo dhawaatay wakhtiga kama dambaysta ah ee ay Spain qabatay ayaa waxaa jira dibad baxyo waawayn oo lagaga soo horjeedo xiritaanka loo gaystay labo ruux oo hogaaminayay dhaqdhaqaaqa madaxbannaanida.